HONOR View10ကို ဝယ်ယူ- ဈေးနှုန်း/သုံးသပ်ချက် HONOR မြန်မာ
MM ကုန်ပစ္စည်း Smartphone HONOR View10
HUAWEI KIRIN 970 AI ပရိုဆက်ဆာ
5 V/4.5 A HONOR အထူးမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းပေးမှု
20 MP + 16 MP ယှဉ်တွဲမှန်ဘီလူး ကင်မရာ
13 MP ရှေ့ကင်မရာ
ANDROID 8.0 ကို အခြေခံထားသည်
HONOR မျက်နှာပြင်အပြည့် ပြသမှု
လုပ်ဆောင်ခြင်း။ကမ္ဘာပထမဆုံး AI processor
Hwawei Kirin 970 ချစ်ပ်အစုံလိုက်သည် သင့်အား ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ ပိုမိုအားကောင်း၍ ပြတ်တောက်မှုမရှိသော စမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ ၎င်း၏ စက်တွင်းထည့်သွင်းထားသော NPU (အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်ချက်ယူနစ်) ကြောင့် အသုံးပြုသူ၏ အပြုအမူအပေါ် အခြေခံ၍ နက်နဲစွာ လေ့လာထားနိုင်သောကြောင့် Honor View 10 က သင့်အား တကယ် နားလည်လာနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။
သင့်အား အမြဲတမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် AI
AI-နည်းပညာ ပါဝင်မှုကြောင့်၊ ယခင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်
AI နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ EMUI 8.0 သည် သင်၏ Honor View 10 အား သင်မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို နားလည်ပြီး သင့်အပြုအမူကို ကြိုတင်မျှော်မှန်းခြင်းအားဖြင့် ရင်းမြစ်များကို ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသည်။ လပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပင် သင်၏ Honor View 10 က အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သေချာစေရန် EMUI 8.0 သည် နောက်ခံတွင် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
AI-နည်းပညာပါဝင်မှုကြောင့်၊ ယခင်ကထက် ပိုမိုမြင့်မား ကောင်းမွန်လာသည်
ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာသော EMUI က သင့်ကို နားလည်ပြီး သင့်ဘဝကို များစွာ ပိုမိုလွယ်ကူလာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
မျက်နှာဖြင့် လော့ခ်ဖြေစနစ် *1
AI မြန်နှုန်းမြင့် ဘာသာပြန်စနစ်
ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့် ပိုကောင်ေးအာင်လုပ်ဆောင်ထားမှုဖြင့်၊ ဂိမ်းတစ်ခုလုံး ချောမွေ့သော၊ ပြတ်တောက်မသွားသော၊ မြန်ဆန်သော ဂိမ်းကစားသည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ခံစားရစေသည်။ ၎င်း၏ ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုကင်းသော ဂိမ်းကစားမှုမုဒ်က မလိုအပ်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ခ်ျများကို စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား ဂိမ်းကို ခေါင်းမဖော်တမ်း ကစားစေနိုင်သည်။
ဂိမ်းကစားခြင်း / ပုံမှန် / အားချွေတာမုဒ်များ
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလိုပါသလား? လျှပ်တစ်ပြတ် ရိုက်ကူးမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ယှဉ်တွဲ-မှန်ဘီလူး ကင်မရာ- အားလုံးကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်
Honor View 10 သည် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်စိတ်ကို လုံးဝ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါသည်။ ယှဉ်တွဲမှန်ဘီလူးပါဝင်သော နောက်ကင်မရာနှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖိုးကပ်စ်ချိန်နိုင်သည့် နည်းပညာတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကျေးဇူးကြောင့်၊ ဝေးကွာသော အကွာအဝေးတစ်ခုမှ ရိုက်ကူးလိုက်သည့် အချိန်တွင်ပင် ထူးကဲကောင်းမွန်သော ပုံအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းပါသည်။
AI နည်းပညာဖြင့် ကြည့်သော ကင်မရာတစ်ခု-
AI-နည်းပညာ ပါဝင်ထားသော အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် မြင်ကွင်းနှင့် အရာဝတ္ထု မှတ်သားခြင်း
အသိဉာဏ်ရှိသော ဓာတ်ပုံပညာနည်းစနစ်များဖြင့်၊ Honor View 10 သည် မတူညီသော မြင်ကွင်းနှင့် အရာဝတ္ထု အမျိုးအစားပေါင်း 13 ခုကို ရွေးထုတ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တစ်ဦးကဲ့သို့ ရိုက်ကူးနိုင်စေရန် ၎င်းသည် သင့်ကင်မရာဆက်တင်များကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးသည်။
AI သုံးပြီး အခိုက်အတန့်တိုင်းကို လက်မလွှတ်တမ်း ရိုက်ကူးလိုက်ပါ
Honor View 10 ကို အသုံးပြု၍၊ သင်သည် ဘဝ၏ တန်ဖိုးရှိသော အခိုက်အတန့်များကို လှုပ်ရှားမှုထောက်လှမ်းစနစ်နှင့် အထူးကင်မရာ စီမံလုပ်ဆောင်မှု အကူအညီဖြင့် ရိုက်ကူးထားနိုင်ပါသည်။
AI-နည်းပညာ ပါဝင်ထားသော 13 MP ရှေ့ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် စတူဒီယို-အရည်အသွေး ဓာတ်ပုံများ
AI-နည်းပညာ ပါဝင်ထားသော အလှပုံမုဒ်သည် ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံအနားသတ်များနှင့် ပိုမိုတိကျသော နောက်ခံမှုန်ဝါးခြင်းကို ပေးစွမ်းပါသည်။
မိနစ်ပိုင်းသာ အားသွင်းရန်လို၍ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံသော ဘက်ထရီတစ်လုံး
သင်သည် Honor View 10 ကို ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် 5.5 နာရီကြာ၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ဖွင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် 19 နာရီကြာ၊ သီချင်းဖွင့်ခြင်းအတွက် 160 နာရီကြာ၊ 4G အင်တာနက် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် 21 နာရီ သို့မဟုတ် 3G အွန်လိုင်းဖုန်းပြောဆိုမှု *2 အတွက် 23 နာရီကြာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ အထူးပါဝါ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် သင့်ကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်စေရန် အသုံးပြုသူ၏ အပြုအမူမှတစ်ဆင့် လေ့လာသည်။
3,750 MAH ဘက်ထရီ
စွမ်းဆောင်ရေးမြင့် ပါဝါ စီမံခန့်ခွဲမှု
ပြီပြည်စုံသော ပုံရိပ်ကို ရယူလိုက်ပါ။
Honor မျက်နှာပြင်အပြည့် ပြသမှု*3 က သင်၏ဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများနှင့် အခြားအရာများတွင် သင့်ကို အပြည့်အဝ နစ်မျောခံစားစေနိုင်သည်။ ဘေးဘောင်မပါသော ဒီဇိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် လက်တစ်ဖက်တည်းတွင်ပင် ပေါ့ပါးစွာ ကိုင်ဆောင်နိုင်သည်။
Honor View 10 သည် နှစ်မျိုးသုံး-LTE/VoLTE နှင့် နှစ်မျိုးသုံး 4G *4 ကို ပေးစွမ်းထားသောကြောင့်၊ သင့်အား အမြဲတမ်း ချိတ်ဆက်မှုရှိနေစေရန် လိုင်းပိုမိစေ၍ ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
1. ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို OTA အပ်ဒိတ်မှ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
2. ဒေတာသည် Honor ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ကွန်ရက်အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 3,750 mAh သည် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
3. မျက်နှာပြင် အတိုင်းအတာများတွင် စံနှုန်းအသစ် သတ်မှတ်ထားသော၊ ဘေးဘောင်မပါသော ဖုန်းများကို ကျဉ်းမြောင်းသော ဘေးဘောင်များ ရှိပြီး မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်အချိုးအစား မြင့်မားသော ဖုန်းများအဖြစ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ ရှုမြင်ထားပါသည်။
4. နှစ်မျိုးသုံး 4G ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှုသည် သုံးစွဲသူ၏ မိုဘိုင်းကွန်ရက် အော်ပရေတာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အထက်ပါစာမျက်နှာများရှိ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပုံများနှင့် ပြသထားသည့် အကြောင်းအရာများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ပံ့ပိုးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တကယ့်ထုတ်ကုန်၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ (အသွင်အပြင်၊ အရောင်နှင့် အရွယ်အစားတို့ ကန့်သတ်ချက်မရှိ အပါအဝင်) အပြင် တကယ်ပြသထားသော အရာများ (နောက်ခံများ၊ UI နှင့် အိုင်ကွန်များ ကန့်သတ်ချက်မရှိ အပါအဝင်) သည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါစာမျက်နှာများရှိ ဒေတာအားလုံးသည် သီးသန့်အခြေအနေများအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ထားသည့် စမ်းသပ်ချက်များမှတစ်ဆင့် HUAWEI ရုံးတွင်း ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ရရှိထားသည့် သဘောတရားအရ တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာအစစ်အမှန်သည် သီးခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ဗားရှင်းများ၊ အပလီကေးရှင်း အခြေအနေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ကွာခြားချက်များအရ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဒေတာအားလုံးသည် အမှန်တကယ်သုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အတွဲများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ အပါအဝင် အချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းလဲမှုများကြောင့် တိကျမှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်၊ အသေးစိတ်အချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် HUAWEI သည် အထက်ပါ အချက်အလက်စာမျက်နှာများရှိ စာသားဖော်ပြချက်များနှင့် ပုံများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပါမည်၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်၏ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်၊ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အညွှန်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်ကုန် အချက်အလက်များသည် ထိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။